Tani waa wejigii seddexaad ee Qorshaheena Istaraatijiyadeed, waxaanu hagaajin doonaa shaqadeena saddexda sano ee soo socota.
Nidaamkani wuxuu ka tarjumayaa dareenka wadajirka ah ee degdegga ah ee la siiyay iyada oo loo marayo caqabadaha bulshada iyo qorshaynta ee maalintaas. Waxa kale oo ay ka turjumeysaa sida aan uga go'anahay in aan isticmaalno khayraadka Aasaasiga ah ee loogu talagalay tixgelinta, kalsoonida, iyo saameynta-dhan oo wada shaqeyn la leh deeq bixiyeyaasheenna iyo wada-hawlgalayaasha beesha.
Dhisidda taariikhda tobnaad-dheer taariikhda iyo aasaaska aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee qoyskan, waxaanu cusbooneysiinnay hawlgalkeenna waxaanan hagaajinay qaabkayaga deeq-bixiyeyaasha si aan u muujinno waqtiyada isbeddelka. Hadafkayaga cusub waa in aan horumarino mustaqbal, hal abuur, iyo mustaqbal badan oo ay dadku iyo meeraha ku koraan.
Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay waqti loogu yeerayo hay'adaha in ay noqdaan kuwo geesinimo leh iyo in la keeno maskax fara badan oo ballaariya fikradaha noocan ah ee suurtogalka ah.
Marka lagu daro nuqulkan dhamaystiran ee pdf, fadlan fiiri ogeysiis wadajir ah madaxweyne Kate Wolford iyo guddoomiyaha guddiga Debby Landesman, iyo video waan soo saarnay. Si aad u codsato nuqul daabacan, fadlan la soo xiriir communications@mcknight.org.
Mawduuca: Isgaadhsiinta, Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah